Nyochaa Insta360 Pro: anyị nwalere igwefoto ogo 360 na-edekọ na 8K | Akụkọ akụrụngwa
Nacho Cuesta | | Foto, Camcorders
Ahịa maka igwefoto ogo 360 ji nwayọọ nwayọọ na-ewu ewu n'etiti ndị ọrụ, agbanyeghị, na ngalaba ndị ọkachamara nhọrọ dị oke oke na ụdị ịhọrọ site na obere. Igwefoto Insta360 Pro bụ otu n'ime ntụnye n'ahịa dị ugbu a, na-egbuke egbuke ya na anya anya anya ya 6 nwere ike ịdekọ foto na mkpebi 8K.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ nkọwa ndị ọzọ gbasara igwefoto VR a, anyị ga-agwa gị atụmatụ ya niile n’okpuru:
2 Insta360 Pro Atụmatụ
3 Mmetụta mbụ
4 Insta360 Pro Ogo Ogo
Unboxing nke Insta360 Pro ihe ijuanya. Ejirila kaadiboodu a ihe na-eguzogide ọgwụ dị na plastik nwere mkpọchi nchekwa abụọ nke na-egbochi oghere mberede nke nwere ike ibute iguzosi ike n'ezi ihe nke akụrụngwa (nke bara uru na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ euro 4.000, ebe a ị nwere ike ịzụta ya).
Ugbu a na ị matara ihe igwefoto 360 a na-efu, ị gaghị eju gị anya na ọ na-echedo ya. Ọ dị oke mkpa maka ngwaahịa na-aga n'ihu na-agagharị.
Ozugbo emepere akpa ahụ anyị nwere ekele maka nke ahụ a na-enyefe nchebe dị na mpụga n'ime ime ya na nnukwu akwa nke elu-igwe. Okwu plastik na-enweta ihe ọkụkụ ahụ na ụfụfụ ahụ ga-etinye ike na ịma jijiji nke mere na Insta360 Pro anaghị ata ahụhụ ọ bụla.
Ewezuga nke dị n’elu, n’ime akpa ahụ anyị na-ahụ ngwa ndị na-esonụ:
12V na 5A chaja
Teepu Rubber iji chebe anya m site na bumps na ájá
Batrị 5100 mAh iji nye ihe dị ka nkeji 70 nke nnwere onwe
USB na Ethernet nkwụnye
Ejiri microfiber akwa
Cintra buuru igwefoto n'ubu ya nke oma
Akwụkwọ na ụlọ ọrụ ozi sitere na ụlọ ọrụ ahụ
Agbanyeghị na etinyegoro ngwa ole na ole, Iji nwee ike ịmalite iji igwefoto, ị ga-achọ SD Extreme PRO V30, V60 ma ọ bụ V90 kaadị ebe nchekwa iji kwado usoro mbufe achọrọ ka ịdekọ vidiyo 8K. Anyị nwekwara nhọrọ nke ijikọ diski ike SSD site na iji njikọ USB 3.0. Dịka ị pụrụ ịhụ, anyị enweghị ike iji ncheta ọ bụla ebe ọ bụ na ihe ndị a chọrọ dị elu.
Insta360 Pro Atụmatụ
Nke mere na ịmara ntakịrị ihe banyere Insta360 Pro, n'okpuru ị nwere Nchịkọta nke njirimara ya bụ isi:
Nku anya ugogbe anya
6 anya azụ
Mkpebi na foto
DNdị DNG Raw ma ọ bụ JPG
7680 x 3840 na 30fps (2D 360)
3840 x 1920 na 120fps (2D 360)
6400 x 6400 ma ọ bụ 30fps (3D 360)
3840 x 3840 ma ọ bụ 60fps (3D 360)
Mkpebi maka gụgharia ndụ
3840 x 1920 na 30fps (2D 360)
3840 x 3840 na 24fps (3D 360)
Dakọtara na YouTube, Facebook, Periscope, Twitter, Weibo
Igwe okwu 4
Nkwado maka ọdịyo gbasara ohere
Site na 1/8000 ruo 60 nkeji
6-mgbatị gyroscope stabilization
Guzo maka njem
1 / 4-20 eri
SSD siri ike karịrị USB 3.0
HDMI 2.0 -dị-D
iOS, A gam akporo, Windows, Mac
5100 mAh batrị
Nnwere onwe nke 75 nkeji
Enwere ike iji igwefoto mee ihe mgbe ị na-akwụ ụgwọ
Ike nke Insta360 Pro na-enye anyị ihe ngosi dị mma na anyị na-eche otu egwuregwu dị oke ọnụ ihu, enyo enyo nke a kwadoro na oge mbụ anyị gbanyere akụrụngwa na onye na-akwado ya malitere ịgbagharị iji kwalite jụrụ oyi, ihe ụlọ aluminom na-elekọtakwa.
A ngụkọta nke anya m isii nke azụ azụ na-ele anyị anya n'akụkụ na-adịgide adịgide. Ha nwere oghere f / 2.4 yabụ na ha na-enwu gbaa iji nweta ezigbo nsonaazụ ọbụlagodi gburugburu gbara ọkụ. Ọ bụrụ na igwefoto nọ na nsogbu, anyị nwere ISO nke a na-agbanwe na-akpaghị aka mana na anyị nwekwara ike ịhazigharị aka na ụkpụrụ sitere na 100 ruo 6400, ọ bụ ezie na n'ụdị dị elu dị otú ahụ nghọta nke mkpọtụ na ihe oyiyi ahụ bụ dị ịrịba ama na nkọ adịghịzi.
Igwefoto na-arụ ọrụ nke ọma. Naanị ihe anyị ga - eme bụ ịnweta Extreme PRO V30 SD kaadị ebe nchekwa (ma ọ bụrụ na ọ bụ V90, ka mma) ma ọ bụ USB 3.0 SSD diski ike ma nwee batrị ebubo. Na nke a anyị nwere ihe ruru nkeji iri asaa na ise nke nnwere onwe ka ịdekọ vidiyo ma ọ bụ weghara foto na mkpebi nke ruru 75K.
Enwere ike ịrụ ọrụ igwefoto site na obere ihuenyo na bọtịnụ anyị na-ahụ n'ihu. Ọ bụ nnọọ mfe na kensinammuo ka aka ebe ọ bụ naanị na anyị nwere bọtịnụ ịkwaga site na menu, bọtịnụ ịnabata na ọzọ ịlaghachi. N'ezie, ịgbanye na-ewe oge (ihe dị ka 90 sekọnd) yabụ ị ga-ebu ya n'uche tupu ị were foto ma ọ bụ vidiyo ahụ.
Nhọrọ anyị nwere ike iji ohere dị ukwuu nke Insta360 Pro na-enye anyị mee ihe iji jikọọ ngwa ndị dị na mpụga dịka igwe okwu (dịka ọkọlọtọ anyị nwere igwe okwu 4 dakọtara na njide ọdịyo gbasara ohere, ọ bụ ezie na arụmọrụ ha dị oke mma) ma ọ bụ ihe nlele HDMI iji lelee onyonyo igwefoto jidere.
Anyị nwekwara ike iji njikọ RJ45 mee ihe iji nwee ọ bandụ nnukwu bandwidth site na iji eriri Ethernet, ọ bụ ezie na ọ bụrụ na ọ masịrị anyị ikuku ikuku karịa, Insta360 Pro Ọ na-abịa onwem na WiFi ka anyị nwee ike jikọọ anyị laptọọpụ ma ọ bụ ama ma nwee ike iji ya dị ka ihe nlele, ihe nkedo dịpụrụ adịpụ, mee mgbanwe oyiyi, kwụ ọtọ na netwọkụ mmekọrịta, wdg.
Dịka isiri hụ, enwere nhọrọ dị iche iche dị ma a bia n'ihe njikọta.
Insta360 Pro Ogo Ogo
Ogo onyonyo bu isi ike nke akụrụngwa. Ọbụghị naanị na anyị nwere ike ịnụ ụtọ mkpebi 8K mana nkọcha nke onyonyo ahụ karịrị nke a na-emebu, ihe kachasị mkpa maka ndị chọrọ ijide onyonyo na 3D ma ọ bụ maka eziokwu mebere, ihe na-arị elu n'ihi iko dị ka Oculus na ụwa nke ahịa ma ọ bụ ntụrụndụ chọrọ iji iji na-enye ndị ọrụ ahụmahụ ọhụrụ.
Ọgwụgwọ na njikọ nke onyonyo niile weghaara nke ọ bụla na lens dị ezigbo irè na nke ahụ na-enye vidiyo ọtụtụ ezigbo nsonaazụ maka onye na-ekiri ya.
Ọ bụrụ na anyị ejiri igwefoto nkọ dị ukwuu nke ukwuu maka ịse foto n'ihe banyere vidiyo. N’okpuru ị ga - ahụ ihe atụ nke foto eserese na Insta360 Pro egosiri ewepụghị, wee tinye otu foto ahụ nke etinyere na “obere mbara ala”.
Ewepụghị foto (lee nha mbu)
O siri ike ịkọwapụta okwu na ngalaba nke na-enye ọtụtụ ohere, ma ihe okike na teknụzụ. Ihe doro anya bụ na ngwaike ahụ na-eso yana Insta360 Pro anyị nwere ike nweta nsonaazụ dị ebube na-enweghị ịbụ maka ọrụ were. Photography na video enthusiasts nwekwara ike-erite uru nke a 360 igwefoto, ọ bụ ezie na ha kwesịrị doro anya banyere ndị na-eri nke ịzụ akụrụngwa nke a caliber (ihe anyị na-ama chere na mpiaji igwefoto dị ka Canon 5D Mark)
Ọ bụkwa sọftụwia ahụ ka ụta dịịrị maka Insta360 Pro elebere ndị niile na-ege ntị anya. Anyị nwere mmemme mmezi ọkachamara nke anyị niile maara mana emeputa na-enye anyị a dịgasị iche iche nke multiplatform ngwa dị mfe iji, ihe ọ bụla anyị maara:
Ngwa njikwa igwefoto: dị ka aha ya na-egosi, ọ bụ ngwa iji nwee ike ịrụ ọrụ Insta360 Pro site na mkpanaka anyị, mbadamba ma ọ bụ kọmputa.
Insta360 Pro Stitcher: ọ bụ sọftụwia na - enyere aka iwepu njehie ndị enwere ike na njikọ nke onyonyo nke igwefoto weghaara, ihe na - adịkarị na ụdị ụlọ ọrụ ndị ọzọ. Mmelite ngwa ngwa kachasị ọhụrụ nke Insta 360 Pro natara emeela ka akụkụ a ka mma.
Onye ọkpụkpọ Insta360: bụ ihe ọkpụkpọ maka foto na vidiyo weghaara. Naanị anyị na-adọkpụ faịlụ nke igwefoto mepụtara ma anyị nwere ike ịnụ ụtọ ya na-akpaghị aka na usoro ogo 360.
Insta360 Studio: ma ọ bụrụ na anyị chọrọ mbupụ ma ọ bụ mee ka ìhè edits na foto ma ọ bụ vidiyo, a mmemme ga-ekwe ka ị na-eme otú.
Ndị a bụ ndị isi ngwa ọdịnala na emeputa na-enye anyị ma dị ka m na-ekwu, anyị nwere ike iji ihe ọ bụla ọzọ edezi software oyiyi na vidiyo.
Insta360 Pro Ọ bụ otu ìgwè zuru oke ma gbakwasara otu mpaghara akọwapụtara nke ọma nke onu ogugu. Ọganihu nke eziokwu na-abawanye na nke na-akpata ngalaba dị ka ahịa iji gbanwee onwe ha site na ịnye ndị ọrụ ụzọ ọhụrụ nke iso ngwaahịa na-emekọrịta ihe ebe ahụ ka igwefoto a nwere ike ịrụ ọrụ dị iche iche maka azụmaahịa mpaghara.
Nhazi ihe onyonyo
Mee mma ma gwụchaa
Okike na ihe okike
Obere obodo. Ọ ka mma ịnwe batrị ma ọ bụ jiri igwefoto rụọ ọrụ na netwọk.
Ọ bụrụ na ị bụghị ọkachamara na ị na-amasị ụwa nke foto na vidiyo, Insta360 Pro ọ bụ ezigbo onye njem. Anyị ga-edebe ebe nchekwa ahụ na vidiyo 360 ma ọ bụ foto dị na kọmpụta anyị na ihe karịrị ezigbo mma, ọ bụ ezie na ọ bụ na nsonaazụ anyị nwetara na igwefoto SLR ma ọ bụ APS-C. N'okwu a, anyị ga-ekpebi ma ọ bụrụ na anyị ahọrọ ọdịnaya mmekọrịta karịa ọdịnaya ọdịnala, ọ bụ ezie na anyị nwere ike ijide ụwa abụọ kachasị mma.
Kụọ ya? 3.950 euro ị ga-akwụrịrị iji nweta ya.
Nyochaa: Nacho Cuesta
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Home » Camcorders » Nyochaa Insta360 Pro
LG Q7 ga-abata na Spain na June maka euro 349